James Rodríguez oo go’aamiyay arinta ku aadan dib ugu soo laabashadiisa kooxda Real Madrid – Gool FM
James Rodríguez oo go’aamiyay arinta ku aadan dib ugu soo laabashadiisa kooxda Real Madrid
(Madrid) 09 Dis 2018. Wargeyska “Don Balón” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in laacibka sida amaahda ah ku joogo kooxda reer Germany ee Bayern Munich James Rodríguez uu go’aamiyay arinta ku aadan dib ugu soo laabashadiisa kooxda Real Madrid.
James Rodríguez ayay wararka sheegayaan inuu xiiseenayo in markale uu dib ugu soo laabto kooxdiisa Real Madrid, inkastoo dalabyo xoogan uu ka helayo kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League.
Wargeyska “Don Balón” ee dalka Spain ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray in 27 jirkan reer Colombia uu sii joogi doono safka kooxda Bayern Munich, maadaama ay jirto is faham daro isaga iyo tababare Niko Kovač.
Dhinaca kale wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in James Rodríguez uu dalabyo xoogan ka helayo kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League, sida Arsenal, Manchester United iyo Liverpool, balse ciyaaryahanka ayaa xiiseenaya in markale uu dib ugu laabto safka kooxdiisa Real Madrid xili ciyaareedka soo aadan.
Si kastaba xiddiga reer Colombia ayaa heshiis amaah ee laba xili ciyaareed ah ku jooga kooxda Bayern Munich, balse heshiiska ayaa qeyb ka ah in kooxda reer Germany ay kula wareegi karto gabi ahaanba saxiixa James Rodríguez 15-ka bisha June 2019-ka ee soo aadan aduun dhan 42 milyan euro.
Alvaro Morata iyo Olivier Giroud oo Akhbaar XUN helaya kaddib kulankii xalay ee Manchester City